Abavelisi besitayile kunye nabaXhasi - iTshayina ngohlobo lweFayile
0.2 oz ibhotile yegolide ngeenxa zonke nge 32-400 entanyeni entanjeni
0.2oz Gold ingqayi cream ingqayi ibhokisi ibhokisi isikhonkwane art izithambiso bead yokugcina izikhongozeli zegolide. Iseti yebhotile elula kunye nesebenzayo yokuhambisa, izinto zokuzilungisa zemihla ngemihla, zenze kube lula ukuhamba kwakho, gcina umfanekiso ubalaseleyo. Iingcebiso ezifudumeleyo: Nceda ungapakishi ubushushu obuphezulu kunye nezinto eziphezulu ze-PH. Nceda usebenzise amanzi afudumeleyo xa ucoca, ungasebenzisi amanzi ashushu ukunqanda ubushushu obuphezulu. intle ukusebenza kwebhotile yomlomo webhotile kulunge kakhulu, kusempilweni, kukhuseleko kwaye akuvuza. Ezincinci kunye kulula yo baphathe, kusetyenziswa ulusu careproduct subpackage izithambiso yegolide, kulula ukuyisebenzisa. Izinto zeNtibacterial, ukhuseleko kunye nokusingqongileyo, buthathaka kwaye buncinci, zithwala ngamaxesha onke. I-Ntainer eyenziwe nge-PS Polystyrene, isiciko esenziwe nge-PP Polypropylene.
10 oz ecacileyo ibhotile Hexagon nge 28-400 entanyeni entanjeni
Ibhotile yethu yesepha eyi-10oz / 300ml yolwelo yenziwe ngezinto zePET zokucaca okungcono kunye nokugqiba. Isikhongozeli sesepha esimanzi siyimilo engqukuva enamacala amane, sikunika amava okuziva ngcono kunye neshelfu yokubonisa ishelu. Igxalaba lama-28/400 linokuxhotyiswa ngempompo yokutshiza, impompo yegwebu, ekulungeleyo ngakumbi ukuyiphatha kunye nokuyisebenzisa. ukucoca, ukucoca izityalo zokunkcenkceshela, ukupakisha iimveliso zeenwele, njl
1.7 oz indalo iHDPE ngeenxa zonke ukuhlamba ibhotile nge 18-410 entanyeni entanjeni
Ibhotile yethu eyi-100ml emhlophe yenziwe ngezinto zeHDPE. I-100% yentsha kunye nomgangatho ophezulu.Yenziwe ngeplastikhi, enokuphinda isebenze, inqabile kwaye iyathotywa.Uyilo lwe-clamshell lulungele ngakumbi ukusebenzisa.isixhobo esifanelekileyo sokukhathalela iinzipho kunye nokwenza i-makeup.Washable kunye nokugcwaliseka kwakhona. Iindidi ezincinci zinokukhethwa.Uyilo oluncinci, oluphathekayo, olulungele ukuhamba, iibhegi kunye nemikhosi. Inkonzo ye-OEM: Ilogo yoshicilelo lwesilika yesilika, ileyibhile yePhepha, ileyibhile yePlastiki, ukugoba ukugoba Kulula ukuyisebenzisa kwaye ucocekile. Ubungakanani obuncinci bulungele ukuhamba okanye ukugcinwa kunye nokulungelelaniswa kwekhaya.
Iinkcukacha zeMveliso: Iibhotile zethu zeebhokisi zeebhokisi ze-2 oz / 60ml zenziwe ngezinto ze-PP zeplastikhi engcono kunye nomzimba webhotile ojikelezileyo, ukubonelela ngamava okungcono kunye neshelfu yokubonisa. kunye nokusetyenziswa.Can isetyenziselwa ukuhambisa umzimba, ukufakelwa kweemveliso zokhathalelo lweenwele, njl njl. Inkqubo yesikhongozeli ilungile kwizicelo ezahlukeneyo kunye neemarike, kubandakanya: Ukucoca uLwelo Ukucoceka indawo yokucheba iinwele Zonke iintlobo zamanzi e-aqua ...
Iinkcukacha zeMveliso: Iibhotile zethu ze-2oz / 60ml zeebhotile zenziwe ngezixhobo zePET ukulungiselela umjikelo ongcono. Ibhotile yimilo enamacala amathandathu, ikunika amava okuziva ngcono kunye neshelfu yokubonisa. Igxalaba lama-24/410 linokuxhotyiswa ngempompo lokutshiza, igwebu Impompo, ekulula ngakumbi ukuyiphatha kunye nokuyisebenzisa.Ingasetyenziselwa ukucoca ikhitshi, ukucoca ukunkcenkceshela izityalo, ukupakisha iinwele, njl njl.
I-8.5 oz emnyama yePlastiki entanyeni ende enentamo engama-20-400
Iinkcukacha zeemveliso zethu Ibhotile ye-8.5 oz emnyama yePlastikhi eNkulu yePlastikhi yeBhotile yipakethe yeplastiki yezinto ezingamanzi.Ulwakhiwo olude lwentamo, ibhotile emnyama inokuthintela ukukhanya ngokuthe ngqo kwibhotile yolwelo.Ukubonelela ngesiphumo esifanelekileyo seshelufu. Ibhotile ithe tyaba, eqinisekisa isiphumo esihle sokuprinta, ke unokuprinta ilogo kwimveliso yakho ukubonisa uphawu lwakho.Ingasetyenziselwa ukupakisha ulwelo, ioyile, njl. ..